"Tsy mendrika hiaina korontana intsony ny vahoaka malagasy. Na eo aza ny tsy fitovian-kevitra eo am-piandrasana ny valim-pifidianana, tsy tokony hisy ny fandrangitana. Handray ny andraikiny ny eo anivon’ny Polisy Nasionaly, ny Tafika Malagasy ary ny Zandarimaria Nasionaly hoan’ireo izay minia mihoa-pefy."
Fanambarana iombonana nataon’ny mpitandro filaminana androany maraina teny amin’ny Toby Ratsimandrava io, nanehoan'izy ireo ny fahavononany hiatrika izay zavatra mety hisy aorian'ny fanehoana ny valim-pifidianana.
Raha ny marina tsy misy tokony hampikorontana rehefa miara-mijery ny marina ny rehetra. Rehefa hita ny tena voka-pifidianana tena izy, zahana ao anaty mangarahara sy ampahibemaso, dia iza no hanao inona? Ny tsy fahamarinana
larohina tsy rariny tokoa mantsy no hany afaka mahazaka vahoaka sy mampikorontana firenena.